Bit By Bit - ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သငျသညျ Bit သာအားဖြင့် Bit သာများ၏ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပါဝင်ကြသည်: ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်လူမှုရေးသုတေသန။ ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစဉ်အတွင်းသင်စာအုပ်ဖတ်နှင့်ကပိုကောင်းစေပါကူညီပေးနိုင်သည်။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့မှတ်စာများလုပ်နေဖြင့်အကြံပြုချက်များပေးနိုင် hypothes.is တစ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မှတ်စနစ်။ ထို့ပြင်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာအုပ်၏အသီးအသီးအပိုင်း၏စာဖတ်သူပစ်ပယ်မှုနှုန်းခြေရာခံအားဖြင့်သင့်သွယ်ဝိုက်တုံ့ပြန်ချက်စုဆောင်းခံရလိမ့်မည်။
ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ဤစာအုပ်ရဲ့ထုတ်ဝေသူ, Princeton University ကစာနယ်ဇင်းစဉ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ပို့ချလျက်ရှိသည်။ ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်တစ်ဦးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်နိုဝင်ဘာလ 2016 ခုနှစ်မှာဖြစ်လတံ့သော Princeton University ကစာနယ်ဇင်းမှတင်သွင်းတဲ့အခါအပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကာလကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုဖမ်းအကြောင်းရုံသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, ပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတုံ့ပြန်ချက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုစုဆောင်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, ငါအထူးသဖြင့်သင်စာစောင်၏ပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းကိုရှိသည်သောမည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။ သငျသညျအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးတွေ့ရသောကဏ္ဍများရှိပါသလား သငျသညျအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောတွေ့ရသောသူတို့၏အချက်များဖြစ်ပါသလား ငါသည်သင်တို့ကိုစစ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထင်မမှတ်သောတောင်းဆိုမှုများအောင်လား သငျသညျဖယ်ရှားရမည်ထင်သောစာအုပ်၏အစိတ်အပိုင်းများရှိပါသလား သံသယအတွက်, ငါသည်သင်တို့ကိုဝီကီပီးဒီးယားမှာအဓိကအခြေခံမူတယောက်လိုကျနာသငျ့တဲ့အခါမှာထင်: ရဲရင့်ခြင်းရှိကြလော့ ။
ဟုတ်တယ်, အပေါငျးတို့သမှတ်စာများအများပြည်သူဖြစ်ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်အသီးအသီးစာမျက်နှာ၏လက်ျာတော်ဘက်မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်သင်၌သူတို့ကိုဖတ်နိုင် စမ်းချောင်းပုံစံကို ။
အဆိုပါဖွင့်ပါကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသူတို့အသိပညာမှ access ကိုတိုးမြှင့်မရှိအကျိုးစီးပွားများပင်လျှင်, စာရေးဆရာများနှင့်ကြေညာသူနှစ်ဦးစလုံးအကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်အကဲဆတ်နှင့်သွယ်ဝိုက်တုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်ပိုမိုမြင့်မားလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အရည်အသွေးအဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်အပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စာအုပ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစဉ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်တန်ဖိုးရှိသောဒေတာများကိုပါလိမ့်မယ်။
ဤ website များအတွက်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလဲ?
ကျနော်တို့အနာဂတ်အတွက်အကြောင်းအပြည့်အဝ blog post ပြုလိမ့်မည်။ ယခုအဘို့, သငျသညျနိုင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code ကိုအကြောင်းပိုမိုဖတ် ။
စုဆောင်းထား Wickham သူ့ကိုငါကအကြောင်းတစုံတခုကိုမျှရေးဖို့တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးပေမဲ့, လုံးဝပွင့်လင်း၌သူ၏စာအုပ်များကိုအချို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပုံရသည်။
လောရင့် Lessig ရဲ့ Code ကို 2.0 တစ်ဦးဝီကီအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်။
တကယ်ကဒီကြိုးစားရန်, ငါ့ကိုမှုတ်သွင်းကြောင်းတစ်ခုမှာစာအုပ်မိုက်ကယ် Nielsen ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် နိုင်မည်ဖြစ်လေသည် Discovery ။ ထိုအခါကသူချပြီးကြောင်းပုံရသည် နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုအပေါ်သူ၏အသစ်စာအုပ် အလားတူလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတဆင့်။
ကက်သလင်းပက်ထရစ်သူမ၏စာအုပ်နှင့်အတူအလားတူအရာတစ်ခုခုကိုပြု၏ ထုတ်ဝေရေး, နည်းပညာ, နှင့်အကယ်ဒမီ၏အနာဂတ်: စီစဉ်ထား Obsolescence ။
ငါလွဲချော်င့်သောအခြားဆက်စပ်စီမံကိန်းများရှိလြှငျအကြှနျုပျတို့ကိုသိစေခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ link ကိုထည့်ပါလိမ့်မယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ် info@bitbybitbook.com ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ရှုပါ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့သဘောတူညီခကျြမူဝါဒကို ။
အဆိုပါ AAUP မကြာသေးမီကအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် ။
သေချာတာပေါ့။ အထွက်စစ်ဆေး code ကိုအပိုင်း ကျွန်တော်ကိုပြုဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုအဘို့ဤ website ၏။
ငါပွင့်လင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းရှိသည်။ ငါဘယ်လိုထိတွေ့ရနိုင်မလဲ?
အီးမေးလ်ပို့ပါ info@bitbybitbook.com ။